Uv Flatbed Printer, Multifunction UV Printer, Uv Daabacaadda Mashiinka - Maishengli
Noocyo kala duwan oo qaabeynta madaxa daabaca, Ricoh, Konica. Nidaamka otomaatiga ah ee saxda ah. Nidaamka shilalka ee ka hortagga shilalka oo la xoojiyay. Isticmaal tiknoolajiyada daaweyn heerkulka qaboojiyaha 'LED', adeeg cimri dheer, isticmaalka tamarta oo hooseeya. Nidaamka digniinta heerka khad garaadka leh.
UV-ga ugu caansan daabacaadda daabacaadda dhalada m ...
Saddex, daabac taleefanka gacanta s ...
Tayada Sare 3D Digital Inkjet UV Flatbed Print ...
Halbeegga alaabta ...
Model Halbeegga Product ...
M-9060W UV Silsiladda + Daabacaha Flatbed
Badeecada wax soosaarka Mo ...
UV Flatbed Printer C + W + Varnish UV Daabacaadda P ...
1. Khad wanaagsan waa furaha s ...
Mashiinka daabacaadda saxeexa daabacaadda daabacaadda UV flatbed
Guangzhou MSERIN Technology Co., Ltd. waxay soo uruurisaa awoodaha ugu sareeya iyo ilaha farsamada ee warshadaha daabacaadda inkjet-ka gudaha, oo daboolaya warshadaha sida qolofka mobilada, baakadaha qurxinta, dhalooyinka, birta, sagxadaha alwaax, saqafka, darbiyada asalka, calaamadaha xayeysiinta, baakadaha khamriga iyo baakadaha shaaha. Baahida loo qabo daabacaadda midabku waa aasaasi, iyadoo diiradda la saarayo R&D, wax soo saar iyo dhiirrigelin tayo sare leh, deggenaasho heer sare ah, iyo qalab daabacaad qiimo-wax ku ool ah leh.
Daahfurka daabacaha cusub ee UV UV —– 9060
Cusbooneysiinta taariikhda daabacaadda dhijitaalka ah. Kusoo gal Suuqa Caalamiga ah Daabacayaasha UV UV. Daabacayaasha Mserin waa cusub yihiin, waxaa jira suuq weyn oo daabacaad caalami ah oo la doonayo in la tuuro. Suuqa waxaa wada koritaanka baaxadda weyn ee qurxinta guryaha darbiga hore iyo warshadaha Xayeysiinta. T ...
Innovation ad Codsi hal abuur leh oo loogu talagalay kiisaska telefoonka
Xalka UV Printer UV ee Goobta Kiiska Taleefanka Waxaad ku jirtaa meesha saxda ah ee mashiinka daabacaadda kiiska taleefanka. Kordhi Ganacsi Daabacaadda Kiiskaaga Telefoonka Hadda! Waxaad hubtaa inaad kahesho Mserin. Waxaan nahay soo saaraha daabacaada UV ee Guangzhou, Shiinaha. Telefoonnadii ugu dambeeyay waxay u muuqdaan kuwo quruxsan ...
Xalka UV UV Printer ee aagga loo yaqaan 'Acrylic Field'
Acrylic waxay leedahay dusha sare ee daabacaadda iyo qaabdhismeedka sawirada daabacanna waxay leeyihiin midabyo dhalaalaya, sidaa darteed waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa calaamadaha looxa, looxyada sawirka, looxyada muujinta, alwaaxa albaabbada, astaamaha waddooyinka, looxyada xayeysiinta, iwm. Xalka daabacaadda wanaagsan ayaa kor u qaadi kara qiimaha k ...